I-Triglycerides ingenye yamafutha athandwa kakhulu emzimbeni, okungezona ngokwawo akwazi ukukwenziwa emzimbeni futhi angene kuwo kanye nokudla. Inani le-triglycerides ne-cholesterol egazini yikhombisi esemqoka ekuhloleni ukuthi kungenzeka yini ukukhula kwesifo sofuba.
Imithombo ye-triglycerides emzimbeni
Umsebenzi oyinhloko we-triglycerides, amafutha avame kakhulu emzimbeni womuntu, ukuwuhlinzeka ngamandla. Okusho ukuthi, zonke i-kilojoule ezaza nokudla futhi azizange zisetshenziswe ngokushesha, zigcinwe emzimbeni ngendlela ye-triglycerides. Futhi akukhathaleki ukuthi yiluphi uhlobo lala makhukhi ahanjiswa, ngoba i-triglycerides ingakhiwa kusukela kokubili amafutha namaprotheni nama-carbohydrate. Ukucubungulwa kwemikhiqizo engenayo kanye nokuhlanganiswa kwamafutha emzimbeni kubhekene nesibindi.
Imithombo eyinhloko yalezi "ezitolo zamandla" yizinhlambi zezilwane nezimila. Ngaphezu kwalokho, imifino i-polyunsaturated fatty acids ngokuyinhloko, noma ngendlela elula - amafutha, isibonelo ummbila noma i-sunflower.
Cishe wonke amafutha awakwazi ukuchithwa emanzini, ngakho-ke i-triglycerides efomini legazi lizungeze igobolondo lamaprotheni ne-phospholipid, ebizwa nge-lipoprotein. Kungenxa yokutholakala kwe-lipoprotein ukuthi la mafutha angaba kalula futhi ngokushesha adluliselwe kuwo wonke umzimba wethu.
Inani le-triglyceride egazini landa
Uma kwenzeka ukuthi i-triglycerides ikhuphuke, ingabangela izifo eziningi ezingaba usongo wangempela ekusebenzeni komzimba. Izifo ezinjalo, ikakhulukazi, kungenzeka ukuba zithwale:
Ukungasebenzi kahle kwe-Renal
Ngaphezu kwalokho, uma i-triglyceride ikhuphuka, ingaba yi-harbinger ye-syndrome ye-metabolic ebonakala njengezinga eliphezulu likashukela egazini, umfutho wegazi ophezulu, ukumelana ne-insulin, futhi kungasiza ukunciphisa inani le-cholesterol enempilo egazini.
Umkhuba wokuqukethwe kwe-triglyceride egazini ngu-150 mg / dl. Uma kwenzeka ukuthi imiphumela yokuhlaziywa ingaphezu kwe-200 mg / dl, kubalulekile ukutshela udokotela ozohlinzekela ukwelashwa okwanele noma akutshele indlela yokunciphisa izinga lamafutha egazini elijwayelekile.
I-Triglycerides ephakanyiswe kungenzeka ingabi nje kuphela ngenxa yokuthuthukiswa kwezifo ezihlukahlukene, kodwa futhi ngenxa yokuziphatha kokungalungile. Emikhuba emibi, engabangela imiphumela embi, ekutholeni ukuphuza ngokweqile nokuphuza utshwala. Kulaba besifazane abakhulelwe, i-triglycerin yanda egazini cishe njalo - lokhu kungenxa yokuthi ngesikhathi sokukhulelwa isimiso se-endocrine somzimba sakhiwa kabusha kakhulu, okungabangela ukuphazanyiswa kwezinhlelo ezibhekene nokuhlanganiswa kwamafutha.
Ngaphezu kwalokho, i-triglycerides ephakanyiswe egazini ingabuye ibe ngenxa yokudla kwemithi ethile. Mhlawumbe wonke umuntu uyazi ukuthi yonke imithi iyingozi, kodwa kulokhu izingozi zokuthola izinguquko ezincane zikhula kaningi. Uma unezinga eliphakeme lala mafutha egazini ngemuva kokuthatha izivimbela ze-beta, ukuvimbela izisu zomlomo, izidakamizwa noma ezinye izidakamizwa eziqukethe i-steroids ne-estrogen, khona-ke udinga ukubona udokotela ukuze aqondane ne-thyrapy yakho noma athathe ezinye izidakamizwa ngezihlobo eziphephile.
Inani le-triglyceride egazini liyancishiswa
I-triglycerides yehla ingase ibe ngenxa yokuntuleka kwesondlo, kanye nokuthi isiguli sinesifo esingathí sina somzimba noma siyashisa. Kukhona nezifo eziningi lapho inani lamafutha ajikeleza egazini linciphisa. Izifo ezinjalo zihlanganisa ukuhlukunyezwa kwe-cerebral, izilonda zamathambo ezinso, ezinye izinhlobo zezifo ezingapheli zamaphaphu, i-myosthenia ne-hyperthyroidism.
Smear kusuka ku-urethra: kanjani futhi kuthathwa kanjani?
"I-Diaskintest": ukubuyekezwa. "I-Diaskintest" ekutholeni isifo sofuba
Ungakugwema kanjani ukubhalisa, noma yiziphi izifo ongazithathi ebuthweni
UCardia akahlanganisi ngokuphelele: yikuphi, izimbangela, izimpawu kanye nezici zokwelashwa
Amathiphu nendlela tie isigqoko ekhanda lakhe
Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela yokuphatha ezishile ngamanzi abilayo
Ubuhlobo zokukhiqiza: Ingqikithi zabo
Admiralty Garden Petersburg - omunye amapaki best emzini
Yini isivumelwano sokuyekeliswa sokuqasha
Kuyini isimo esikhona manje - a zomculo iqembu noma ikhadi lebhizinisi sezilimi?
Colorful futhi buphawuleka Chechen cuisine